यसकारण ओलीले विश्वासको मत नपाए पनि हार्दैनन्, सबै बुझाउने भिडियो - Khabar Nepali
संसद विघटन उल्टिए पछि पनि जब प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएनन् तब देखि नै विपक्षीदलहरुले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भन्दै धम्क्याइरहे तर अविश्वासको प्रस्ताव भने ल्याएनन् । अब प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आफैले विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आउँदो २७ गते प्रतिनिधीसभाको अधिवेशन आवहान गरिएको छ । संसदको गणित अनुसार जम्मा सांसदको संख्या २७५ मा बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिन्छन् तर ५ पद खाली भएकाले अहिले १३६ सांसदले नै बहुमत पुग्छ । संसदमा ओलीको दल एमालेका १ सय २१ सांसद छन् । आफ्नै दलका सबैले मत दिए पनि विश्वासको मत लिनका लागि ओलीलाई अरू १५ जना सांसद भए चाहिन्छन् ।  यसका लागि जसपाको १४ सांसद भएको एउटा पक्षलाई विश्वासमा लिन ओलीले सक्दो कसरत गरेका छन् तरपनि उनलाई बहुमत पुगेको छैन । यो हिसाब अर्को पाटो पनि छ ।
एमालेभित्र ३५ जना सांसद माधव नेपाल समूहमा छन् । यी मध्ये २७ जनालाई त ओलीले स्पष्टिकरण नै सोधिसकेका छन् । यी सांसदले फ्लोरक्रस गर्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । अहिले त नेपाल पक्षका सांसदहरुले सामूहिक राजिनामा दिने तर ओलीलाई समर्थन नगर्नेसम्म समाचारहरु बाहिरिएका छन् । यसैले चमत्कारै भए मात्रै हो नत्र ओलीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित प्राय छ । आफुले नपाउने विश्वासको मत लिन किन ओली अग्रसर भए ? राजनीतिकवृतमा अहिले चलेको प्रश्न यहि छ । आज यहि प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर कुरा गरौँ ।
ओलीको सरकार अहिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको हो । यसरी बनेको सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लियो भने संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार त्यसको ३० दिन भित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ तर ओलीलाई हटाउन दौडधुप गरिरहेको माओवादीले ओली आफैले विश्वासको मत माग्दासम्म पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको थिएन । यसैले धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिइएको होइन ।
यसो त संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठाने विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान छ । तर यहि बेला किन त ? पुन: प्रश्न त्यहि आउँछ ।
यो प्रश्नको सहि जवाफ ओलीले मात्रै दिन सक्छन् । बिडम्बना भन्नु पर्छ कि नेताहरुमा देखिएको इमान्दारिता, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र नैतिकताको कमीले गर्दा नेपाली राजनीति पानी भन्दा तरल छ । यसैले घटनाक्रम यसरी फेरिन्छ कि हाम्रो अनुमान हवाइ फायर भन्दा बढि निशानाहीन बन्छ । त्यै पनि अहिलेको घटनाक्रमका आधारमा ओलीले विश्वासको मत लिन चाहनुका ३ वटा कारणहरु उल्लेख्य देखिन्छन् । यसबारेमा तपाईले भिडियोमा थाहा पाउनुहुनेछ । कृपया, भिडियो हेर्नुहोस् ।